Tola ooltummaa Ganna baranaatin Finfinneen barruulee miiliyoona 7.2 walitti qabuuf hojjechaa jira – Fana Broadcasting Corporate
Tola ooltummaa Ganna baranaatin Finfinneen barruulee miiliyoona 7.2 walitti qabuuf hojjechaa jira
Finfinnee, Waxabajjii 12,2011(FBC)- Tola ooltummaa Ganna baranaatin barattoota kuma 600 ta’aniif barruuleen barnootaa miiliyoonni 7.2 ni gumaachama jedhan itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uuman.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kennaa barruulee kanaan ala, manneen barnootaa mootummaa 408f haaromsi akka taasifamu ni hojjeta jedhan Injiinar Taakkalaan.
Hojiin tola ooltummaa Gannaa dargaggootaa fi jiraattoota magaalitiitin haala gaariin adeemsifamaa jira jedhaniiru itti aanaan kantiibichaa ibsa har’a laataniin.
Hojiiwwan amma eegalaman cinaatti sadarkaa magaalaatti dhiiga arjoomuu, biqiltuu dhaabuu fi kan bara darbaniirra bifa adda ta’een manneen haadholii haaromsuun akka hoojjetamu dubbataniiru.
Dabalataanis abbootii qabeenyaa, dargaggootaa fi jiraattota magaalaa hirmaachisuun baruulle, uffata mana barnootaa sadarkaa isaa eeggatee fi meeshaalee garaa garaa barnootaf oolan barattootaf dhiheessuuf hojjetamaa jira jedhan.
Torban agarsiisa aadaa Oromoo baname
Dargaggeessi gaaffii gaa’ilaa dhiyeessuuf bishaan keessa lixe lubbuun darbe